No। 1 Rewarding News | इनाम पुरस्कार: प्रेम, सेक्स र इन्टरनेट
इनाम पुरस्कारमा धेरै भइरहेको छ, त्यसैले हामीले 'इभरर्डिङ न्यूज' लाई सुरूवात गर्ने निर्णय गरेको छौँ जुन राउन्ड-अपको रूपमा तिमाही भन्दा बढी छ। हामी हरेक दिन जहाँसम्म सम्भव छ र साप्ताहिक समाचार कथाहरू गर्छौं। यदि तपाइँले केहि चीज हामीलाई आवरण गर्न चाहानुहुन्छ भने मात्र भन्नुहोस्। सबै प्रतिक्रिया मैरी शर्पमा स्वागत छ mary@rewardfoundation.org.
ठूलो लटरी कोष
"एप्पल, गुगल, फेसबुक? तिनीहरू अनिवार्य रूपमा दबाइ डिलरहरू हुन् "
आत्म-दयालु: पुस्तक समीक्षा
यति लामो, विदाई ...
कोमल हेरचाह गर्दै
पोर्न र अकेलापन बीच लिङ्क
रिश्ते भित्र पोर्न
स्कटिश संसद शिक्षा र कौशल 'पीएसएच मा पेपर
समाचार, दृश्य र अन्तरवार्ता
इनाम पुरस्कारको लागि धन्यबाद छ कि यो बाट पुरस्कार प्राप्त भएको छ विचारहरु मा निवेश बिग लॉटरी फंडको स्ट्रिम। हाम्रो परियोजनाको 'के यो-यो-अन-द-टिन' शीर्षक छ स्कटल्याण्डमा युवाहरू बीच पोष्टोग्राफी हर्दाहरूको जागरूकता बढाउँदै। उद्देश्य व्यक्तिगत र सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा (पीएसएचई) कार्यक्रमको भागको रूपमा स्कूलहरूको लागि पाठ योजनाहरू विकास गर्ने हो।
हामी मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य, उपलब्धि, सम्बन्ध र अपराधिकतामा प्रभावहरूको साथमा मस्तिष्कलाई अधिक उत्तेजित गर्न अश्लीलको क्षमतामा फोकस गर्नेछौं। हामी अश्लील छोड्न र लचीलापन निर्माण गर्न तरिकाहरू साइन इन गर्नेछौं। हामी माछा, अन्तरक्रियात्मक र उमेर-उपयुक्त सामग्री विकास गर्न मद्दत पुर्याउने केही शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको प्रतिभा छ।
यो उत्कृष्ट पढ्नुहोस् लेख तपाईको फेसबुक कसरी सचमुच तपाइँको दिमाग को हेरचाह गर्दछ। प्राविधिक आविष्कारहरूले बुझाए कसरी ठूलो केटाहरूले हाम्रा भावनात्मक हानिकारकहरूको फाइदा उठाउँछन् कि हामीलाई हामीलाई दुर्व्यवहार गर्न र हामीलाई फिर्ता आउँदछ। तिनीहरू अरबौं र हामी, विशेषतया किशोरहरू बनाउँछन्, निराश, चिन्तित र जीवनसँग असन्तुष्ट हुन सक्छ।
हामी भिडियो साक्षात्कारको हाम्रो पोर्टफोलियोसँग व्यस्त छौं। हामीले स्कॉटिश को नयाँ र अपील युवा अभिनेता रोबी गर्डन संग नयाँ गरे आश्चर्यजनक मूर्खहरूथियेटर कम्पनी र ईसाई मैकनेलसँग, प्रेरणादायक लचीलापन कोचबाट भ्वाइन्ट तत्वहरू। हामी भिडियोहरू कसरी सम्पादन गर्न सिक्ने ढिलो प्रक्रिया सुरू गर्दैछौँ। हाम्रो योजना को यी केहि साक्षात्कारहरु लाई केहि केहि हफ्तों मा वेबसाइट मा छ। जब तिनीहरू अनलाईन हुन्छन् हामी हामी ट्वीटर गर्नेछौं।
हामी उत्कृष्ट उत्कृष्ट पुस्तकलाई सिफारिस गर्न चाहन्छौं आत्म दया - आफैलाई धकेल्न रोक्नुहोस् र पछि असुरक्षा छोड्नुहोस् मानव विकास क्रिस्टिन नफ प्रोफेसर द्वारा। हामीले क्रिस्टनले आफ्नो पुस्तकको बारेमा गत वर्ष सम्मेलनमा कुरा गरेको कुरा सुन्नुभयो र प्रभावित भए। उनले आफ्नो वास्तविक जीवनमा केही वास्तविक समस्याहरू पछाडि लिएको छ त्यसैले यो सिद्धान्त होइन। यस पुस्तकले दमन, चिन्ता र आत्म-आलोचनालाई सङ्घर्ष गर्ने एक शक्तिशाली समाधान प्रदान गर्दछ जुन एक प्रेस र प्रतिस्पर्धी संस्कृतिमा जीवन बिताउन आउँछ। त्यहाँ प्रयास र टेस्ट अभ्यासहरू र अडियो डाउनलोडहरू निःशुल्क उपलब्ध छन्। यो एक आकर्षक र उपयोगी पुस्तक हो।
यति लामो, विदाई...
टीआरएफले जेमी राइट र डेभीड मार्टिनलाई अलविदा भनिन्, यो वर्ष नेपियर विश्वविद्यालयका दुई विद्यार्थी नियुक्तिहरू। तिनीहरू हामीलाई हाम्रो वेबसाइट विकासको साथ सहयोग गरिरहेका थिए र हामी तिनीहरूलाई उनीहरूको उपयोगी काम अनुभव प्राप्त गर्न आशा गर्दछौं। उनीहरूको करियरको अर्को चरणमा उनीहरूको शुभकामना।
बान्फिनको बारेमा के गर्ने छ ...
त्यहाँ छ प्रमाण त्यो साझेदार द्वारा स्ट्रोक गरिएको छ अरु कसैलाई वा आफैलाई स्ट्रोक गर्नु भन्दा बढी सुखद छ। घोरिएको हृदयले हृदयको दर घटाउँछ। यो NHS को लागी उच्च लागत र लागूपदार्थको साइड इफेक्टको विकल्पको रूपमा विचार गर्नुको लागि केहि हो। यसले लिङ्ग व्यवहारको बारेमा हामीलाई के राम्रोसँग लिङ्क गर्दछ। हेर्नुहोस् यहाँ एक आकर्षक लेख को लागि "प्यार मा रहन लाज प्यार" जो बोलन व्यवहार को जादू को बारे मा अधिक बतािन्छ।
कुन पहिला आउछ, अश्लील वा निष्ठा? यो मा अनुसन्धान ती पोष्टोग्राफीहरू देख्नेहरूलाई एकाकीपनको अनुभव गर्न अधिक सम्भव थियो, र जोनिलोपन अनुभव गरिरहेका थिए उनीहरूलाई पोर्नोग्राफीको सम्भावना बढी सम्भव थियो। यी निष्कर्षहरू अश्लील लिङ्गोग्राफी लिङ्कसँग सम्बन्धित छन् नकारात्मक असर / भावनालाई प्रयोग गर्दछ।
युगलहरूमा अश्लीलको प्रभाव के हो? यहाँ केहि उद्धरणहरू छन् महत्त्वपूर्ण नयाँ अध्ययन पॉल जे राइट द्वारा नेतृत्व:
"यौन उत्तेजनाको साथ यौन उत्साह सहन गर्न पोर्नोग्राफिकलाई मनपर्छ र यौन सञ्चारलाई बेवास्ता गर्न दुबै यौन सन्तुष्टिसँग जोडिएको थियो।"
"प्रायः अश्लील पोर्नोग्राफी हस्तमैथुनको लागि अत्याधुनिक उपकरणको रुपमा प्रयोग गरिन्छ, अधिक व्यक्ति यौन अत्याचारको अन्य स्रोतहरूको लागि पोर्नोग्राफको लागी कन्डम हुन सक्छ।"
"हामीले पार्यो कि कम पुरुष र महिलाले यौन संचारको मूल्य, उनीहरूको कम रिश्तेदार यौन सन्तुष्टिबारे रिपोर्ट गरे।"
अप्रिल 2017 मा, स्कटल्याण्डमा बदला अश्लीलको नयाँ नियमलाई बलियो बनाइएको थियो दुर्व्यवहार व्यवहार र यौन हर्म अधिनियम 2016. खुलासा वा एक अंतरंग फोटो वा भिडियो खुलासा गर्न को लागी अधिकतम दण्ड5सालको कैदी हो। अपराधमा निजी तस्बिर लिईएको छ जहाँ कसैलाई नग्न थियो वा केवल अंडरवियरमा वा यौन काममा व्यस्त व्यक्ति देखाइन्छ। थप पढ्नुहोस् यहाँ.
स्कास्का संसदको शिक्षा र कौशल समितिले सेक्स र सम्बन्ध शिक्षामा यसको रिपोर्ट भर्खरै प्रकाशित गरेको छ। पिल्लहरूले भनेका छन् वे पाठ जीवविज्ञान भन्दा बाहिर जान र रिश्तेको बारेमा थप कुरा गर्न चाहन्छन्। समाधानमा योगदान दिनको लागि इनाम पुरस्कार बिग लॉटरी फंडबाट पुरस्कारले हामीलाई प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। (माथि हेर्नुहोस्) समितिको पेपरमा थप विवरणहरू हेर्न सकिन्छ यहाँ.